Olee otú Jidere YouTube Audio Mfe
> Resource> YouTube> Olee otú iji Jidere Audio si YouTube
YouTube jupụtara na ụdị nile nke videos gụnyere fim, vidio egwú, na arụrụ n'ụlọ videos. Mgbe ị na-ọzọ dọtara visual mmetụta na YouTube videos, ndị ọzọ nwere ike ịbụ nkọ na ege ntị nke ọdịyo akụkụ, dị nnọọ ka e nwere abụọ iche iche nke ndị na-amụ dị ka visual na audial. Afanyekwa kasị audio ihe ọṅụṅụ nke YouTube videos, Wondershare gụgharia Audio teepu bụ a zuru okè ngwá ọrụ aka. Ọ nwere ike na jidere audio si YouTube na-enweghị àgwà ọnwụ n'ime MP3 faịlụ nke nwere ike mfe kpọfere ọ bụla obere ngwaọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, mgbe egwu na-jidere, ị nwere ike ime ka ọtụtụ n'ime ya dị ka eke ụdaolu na edezi isi ozi. Anyị ga-atụle ihe ndị a niile na zuru ezu. Akpa ego a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka-jidere YouTube audio n'okpuru.
1 Wụnye YouTube audio grabber
Download a audio grabber site na ịpị Download icon n'elu na wụnye ya. Pịa Run imeghe omume Mgbe kpaliri n'oge echichi. Abụọ nsụgharị dị maka gị ka ị na-ahọrọ. Anyị ga-tumadi uche na windo version.
2 jidere music si YouTube
Pịa nnukwu Record button akpa iji nweta zuru ezu ọdịyo faịlụ. Mgbe ahụ gaa YouTube.com na-egwu videos. Mgbe e nwere ụda na-abịa site kọmputa gị, mgbe ahụ, a audio grabber nwere ike sensitively ịchọpụta na ọ na-amalite na-arụ ọrụ.
Mgbe ọdịyo na-jidere si YouTube, ị ga-ahụ ha egosipụta n'ime Library na ịchekwa a Obodo nchekwa. Họrọ niile music na Library na pịa Tinye ka iTunes bọtịnụ. Mgbe ahụ music pụrụ ịchọta iTunes si nke ị nwere ike mmekọrịta ọ bụla iDevices.
Iji chọta ebe music na-echekwara, i kwesịrị nri-pịa ọdịyo faịlụ ma họrọ Mepee na nchekwa.
Ọzọ fancy atụmatụ: f
Ịmepụta ụdaolu: Pịa mgbịrịgba icon nso music, mgbe ahụ, a bitmap ga-egosi na ala n'ihi na ị na-ahọrọ otu akụkụ na-azọpụta M4R maka iPhones na MP3 ihe ọ bụla ọzọ obere ngwaọrụ.
Edezi ọmụma: Nke a YouTube audio grabber nwere ike ịchọpụta ọmụma bụ isi banyere songs. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, i nwere ike hazie ọmụma site onwe gị. Right-pịa ọdịyo faịlụ ma họrọ View zuru ezu. Pịnye na Okwu ọ bụla na nri n'igbe ahụ ga-gbapụta.
Isetịpụ oge oge: Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ YouTube ọdịyo faịlụ ka jidere, setịpụrụ a oge site na ịpị elekere na akara ngosi na isi window bụrụ na ị nwere ndị ọzọ dị mkpa ihe na-eme.
Na ọtụtụ ọrụ tụlere n'elu, gịnị mere ibudata ya na nwere a na-agbalị ugbu a?